Ogaden News Agency (ONA) – Wadamada Midowga Yurub (EU) & Britain oo Heshiis Gaadhay.
Wadamada Midowga Yurub (EU) & Britain oo Heshiis Gaadhay.
Kadib wada hadal qaatay muddo laba maalmood ah, ayaa ugu dambayntii dalalka kujira Midowga Yurub iyo Britaiin wada gaadheen heshiis. Britain waxay kamid tahay dalalka kujira Midowga Yurub.
Raysal Wasaaraha Britain David Cameron ayaa ol-olihii doorashadiisa sanadkii hore 2015 sheegay haddii dib loo doorto inuu Britain ka saarayo Midowga Yurub isla markaana cod u qaadayo dadweynaha dib loo weydiinayo kasii mid ahaanshaha EU, kadib markii Britain ay kusoo jabeen muwaadiniin u dhashay wadama EU oo shaqo iyo nolol raadis ah.
Qorshaha aftida dadweynaha looga qaadayo ayaa David Cameron ballan qaaday bartamaha sanadka 2017.
Raysal wasaaraha Britain Cameron oo shir jaraa’id ku qabtey magaalada Brussels ee dalka Belgium ee wada hadalku ka socdey ayaa sheegey inuu soo dhawaynayo heshiiska, isla markaana maanta oo Sabti ah hordhigi doono Golihiisa Wasiirada, wuxuuse sheegey in dalkiisu aanu isticmaali doonin lacagta Euro.
Heshiiska lagu sii haynayo Britain Midowga Yurub ayaa dhigaya in Britain lasiinayo tixgelin gaar ah, markii laga hadlayo sharciyadda iyo heshiisyada Midowga Yurub. Madaxweynaha Komishanka Midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in kubbadu hadda agtaalo Britain, iyagana laga doonayo inay Midowaga kasii mid ahaadaan iyo in kale.
David Cameron ayaa watay qorshe lacagta kaalmada ah ee lasiiyo dadka shaqo la’aanta ah ee dalkiisa u dhashay aan lasiinaynin kuwa kasoo haajirey dalalka kalee EU ugu yaraan muddo dhan 13 sano, waxaana heshiiskan qeexaya muddo 7 sano ah oo keliya.
Sidoo kale Heshiiskan ayaa dhigaya in Britain aan laga doonaynin in uu qayb ka noqdo barnaamijyada is-dhexgalka Midowga Yurub dhexdiisa ah. Haddii golaha Wasiirada ee Britain ay heshiiskan oggolaadaan waxay meesha ka saaraysaa ballan qaadkii uu doorashada ku galay Cameron taasoo Britain u leh cawaaqib xumo.